SIDA LOO QALAJIYO KAROOTADA FOORNADA, OO LAGU BADBAADIYO FITAMIINADA: MA LAGAMA MAARMAAN IYO SIDA LOO SAMEEYO GURIGA IYO QALAJIYAHA KORANTADA, IYO SIDOO KALE SIDA LOO KAYDIYO? - KHUDRADDA
Karootada waa mid ka mid ah waxyaabaha ugu caamsan ee suxuunta. Waxaa lagu daraa suunka koowaad iyo kan labaad, keega, diyaariyo saladh iyo casiir. Laakiin dalagga xididku waa mid furfuran oo ku saabsan xajinta.
Si uu ugu raaxaysto dhadhankiisa oo loo hayo muddo dheer, waxaa lagama maarmaan ah in la ilaaliyo xaalado dhowr ah - laga bilaabo xulashada noocyo ku habboon "sariir" dheer si loo diyaariyo qolka taas oo khudradda "overwinter". Oo waa in la qalajiyaa intaan la kaydin?
Awoodda karootiga in la kaydiyo waqti dheer iyada oo aan lumin dhadhanka, iska caabin kasta oo nooc kasta oo ah jeermiska, caaryada iyo boobka waxaa loo yaqaan tayada ilaalinta. Longevity waxaa lagu go'aamiyaa waxyaabaha ku filan ee sonkorta iyo fiber, iyo sidoo kale walxaha qalalan, taas oo ka hortagi doonta sii xumeynta wax soo saarka.
Dhexdhexaadiyaha ugu muhiimsan waa inuu ahaadaa mid yar, oo aan lahayn qadhaadh iyo cagaarka, iyo midabka asaasiga ah waa inay ahaato mid la mid ah sida badan buluugta.
Miraha leh dusha sare, dharka waa inay ku haboon tahay kaydinta., waxaa fiican inaad soo qaado karootada ee cabbirka isku mid ah. Ma aha inay waxyeello farsamo, dildilaaca, meelaha qaboobaha ah.
Noocyada ku habboon geedi socodkan
Marka aad dooranaysid noocyada dhirta ku habboon kaydinta muddada-dheer, sii wad mabda 'aasaasiga ah - gaaban xilliga Bisaylka ee dabacasaha, ka sii xun waa la keydiyaa. Noocyada Bisaylkiisa ah, xilliga Bisaylkiisa kaas oo ah 120-140 maalmood laga bilaabo wakhtiga biqilka, ayaa si fiican loo ilaaliyaa. Waxay u badan yihiin kuwa u adkeysanaya cudurrada waxayna awoodaan inay si sahlan u ilaaliyaan dhadhanka iyo dhismaha ilaa xagaaga soo socda.
Noocyada ugu wanaagsan ee Biyo-Biyaha ah waxaa ka mid ah:
Ruushka "Boqoradda Qaboobaha";
Noocyada xilliga badhtamaha ah ayaa xoogaa sii xumeeyey., laakiin waxaa ka mid ah noocyo dhowr ah oo aan ka liidato tayada ilaalinta Bisaylkiisa dambe:
Waa muhiim! Haddii joornaal loogu talagalay kaydinta ee noocyada hore ee Bisaylkiisa, ereyga beertooda waa in la hagaajiyaa iyada oo ku saleysan dhererka Bisaylkiisa. Karootada noocan oo kale ah ayaa la beeray si dambe si ay u bislaadaan bilowga Oktoobar ama dhammaadka Sebtembar.
Faahfaahin dheeraad ah oo ku saabsan noocyada ay ku haboon tahay kaydinta karootada waxaa laga heli karaa halkan.
Miyaan u baahanahay inaan sameeyo tan ka hor kaydinta
Fikradda aan sinnaanta ahayn waa in dabacasaha lagu daboolo qalajinta khasabka ah iyo diyaargarowga gaarka ah ka hor inta aan la gelin kaydinta.
Qummanka habboon ee xididka. Si aan u waxyeeleynin dhismaha khudradda, waa in si taxadar leh looga soo baxaa, qaadashada dushooda khudradda iyo isticmaalka qalabka wax lagu qaado haddii dhulku aad u adag yahay. Si ay dalagga u da'yar iyo wax yar la qalajiyey, waxaa laga tagay qorraxda 2-3 saacadood.
Meelaha la gooyey. Waxaa la jarjaraa caawinta maqaska si saldhig u ah si looga fogaado biqilka ka yimaada aag aan la taaban karin.
Qallajinta Karootada oo idil waxaa laga nadiifinayaa mashiinnada wasakhda. Filimada Polyethylene, taraandhoolin ama maro qarsoodi ah ayaa la dhigaa dhulka, karootada ayaa lagu shubay. Qalajinta, dooro hannaan iyo meel hagaagsan.
Mid ka mid ah siyaabaha waxtarka leh ee loo ilaalin karo karootiga muddo dheer waa qalajinta, gaar ahaan maqnaanshaha xaaladaha ku haboon iyo qolka kaydinta (maqaasiinka, hoose, godadka). Intaa waxaa dheer, daaweynta noocan oo kale ah ayaa kaa caawin doonta inaad ilaaliso inta ugu badan ee nafaqooyinka, fiitamiinada iyo macdanta dalagga xididka iyo ka hortagga burburinta ka koobnaanta nafaqada.
Digniin! Karootada qalajinta waxaa loo doortay hab la mid ah sida koriinka mudada dheer - dabayaaqadii ama bartamihii xilli-ciyaareedka, oo leh maaddooyin badan oo qalabka qalalan, soodhawajiyo qoyan, oo aan lahayn cagaarka iyo xuduudda aan dhab ahayn.
Ugu horreyntii, miraha waxaa laga sii daayaa dushooda, iyaga oo gooyaa oo saaraya qoorta cagaaran saldhiga. (sawiro badan oo ku saabsan sida loo gooyo xididka, waxaad ka heli kartaa halkan). Marka xigta, xidid kasta waa in si taxadar leh loo kontoroolaa waxyeellada, gooyo meelaha cayayaanka, jarista. Waa lagama maarmaan in lagu maydho dabacasaha hoos biyo, waxaad xitaa isticmaali kartaa buro adag ama burush.
Marxaladda soo socota waa xoqin. Haddii aad u baahantahay in aad qabato tiro badan oo khudradda cagaaran, waxa fiican inaad isticmaashid digirta - tani waxay si xawli leh u xawaaraysaa geedi socodka.
Ka hor inta qalajinta, karootada waa in la beeray. Si tan loo sameeyo, biyo ku karkaree weel weyn oo geli miro ku jira. Ka dib 15-20 daqiiqo, ku dheji karootada leh cadayga - waa inay galaan qashinka iyagoo dadaal yar. Ka dib daaweyn kuleyl, qabow sheyga ku jira biyo qabow oo qabow iyo shukumaan. Muddada loo yaqaan "blanching" waxay kuxirantahay xajmiga miraha - yar yar "gaari" horay - 12 daqiiqo, ballaaran - 20 daqiiqo.
Khudradda xididka leh ee qallajinta ah ee qalajinta waxay noqon kartaa mid aan qaanuun lahayn - qashin, wareegyo, quarters, ciriiri ama jeexmo. Qalabaynta iyo karootada cayriin, oo aan laheyn wax cayilan.
Dabacasaha qalajinta waxaa loo samayn karaa laba siyaabood - dabiici ahaan iyo isticmaal kuleylka qalabka korontada, tusaale ahaan foornada ama qalajiyaha korantada. Xaaladda kowaad, qaabsocodku wuu sii dheeraanayaa, laakiin tamar dhaqaale. Habka labaad wuxuu kuu ogolaanayaa inaad si dhaqso ah u qallajisid qalajinta mararka qaarkood, laakiin kharashka korontada.
Laga soo bilaabo laba toddobaad gudahood. Furaha guusha waa doorashada saxda ah ee goobta qalajinta. Gaar ahaan - beerta ama beertii oo leh xakam yar oo koonfurta ah. Qadar badan oo qorrax ah ayaa kaa caawin doona si dhakhso ah u qalaji qudaarta.
Karootada waxaa loo diyaariyaa sida caadiga ah - waa la dhaqay, diiray oo jaray. Ku shub qaadista saxda dhalada, saxarada ama saabuunta dheer ee hal lakab iyo meel qorrax ah. Wakhti ahaan waa inay isku qasaan qaybta shaqada (maalmo kasta). Ka dib markii la qalajiyo, googooyinku waa kala-soocaan, aan ciriiri lahayn ama wasakhaysan ayaa la saarayaa.
Iyadoo gacan ka heleysa tiknoolajiyadda casriga ah, karootada cusub ayaa si dhaqso ah loo qalajin karaa. Microwave ku filan awood kasta.
Karootada jarjar ama ulaha dhuuban.
Diyaarso laba shukumaan waraaqo ah - mid ka mid ah saxan caag ah oo ka samaysan microwave, iyo tan labaad si loo daboolo daaqsiyada.
Ku rid galaas biyo ah oo ku xiga saxanka.
Ku shub foornada ugu yaraan 3 daqiiqo.
Hubi karootada diyaargarowga - haddii ay qoyan tahay, sii wad qalajinta ilaa 30-40 daqiiqo koronto dhexdhexaad ah, sii dheereyn habka loo baahanyahay.
Talo! Inta lagu jiro qalajinta microwave waxaad u baahan tahay inaad hubiso in biyaha muraayadda aysan karkarin.
Cabbitaanka qalajinta waa habka ugu caansan ee loo sameeyo karootiga., tan iyo markii loo samayn karo foornada guriga, badbaadinta fitamiinada.
Karootada diyaarsan oo la warshadeeyey waa dhul aan kala sooc lahayn.
Diyaarso warqad dubista - waa inay noqoto mid qalalan oo nadiif ah.
Foornada waxaa ka mid ah diirimaad ilaa 70 darajo.
Karootada waxay ku shubtay xaashi dubista oo ah lakabka keliya. Haddii khudradda xididdada lagu jajabiyo huurka, xajmiga ugu sarreeya ee lakabka waa 1 cm.
Rug cagaaran oo leh khudaar ayaa lagu dhejiyaa foornada, albaabku waa xiran yahay. Haddii foornadu aysan laheyn xeelad, albaabka waxaa laga dhigi karaa wax yar.
Karootada ayaa looga tagayaa qallajinta 6-8 saacadood, kareyso mararka qaarkood waxayna u jeedaan si siman u soo saara qoyaan.
Biyo la qalajiyey ayaa si toos ah loogu qaboojiyay xaashida dubista oo la keydiyay.
Iyadoo foornada ay ku shaqeyneyso, hubso in qolku si fiican u qalajiyo - furo daaqad ama daaqad gaaban.
Cuncunku wuxuu kaloo fududeyn karaa geedi socodka dalagyada.u adeega sidii loo bedeli lahaa foornada iyo microwave.
Karootada jilicsan, dhaq, boodh iyo jarjar.
On qalajiyaha korontada dhigay heerkulka la doonayo - oo ku saabsan 60-70 digrii.
Ku shub khudaarta caleemaha guluubka oo aad u dillaacdo.
Nidaamku wuxuu qaadan karaa waqti dheer - laga bilaabo 6 ilaa 12 saacadood. Waxay ku xiran tahay qaabka korantada korantada, awoodeeda, iyo sidoo kale cabbirka xaleefyada. Waa lagama maarmaan in si adag loo raaco tilmaamaha qalabka, dejinta qaabka la rabo iyo muddada.
Digniin! Hannaanka, karootiga iskuma qasbi karno, laakiin waa inay si isdaba-joog ah isu bedbeddelaan.
Daawo fiidiyowga ku saabsan karootada qalajinta ee qalajiyaha korontada:
Khudradda la qalajiyey ee shaaha
Dad yar ayaa ogyahay inaad ka dhigi karayso fiitamiinka fiitamiinada leh ee dabacasaha. Waxaad karisaa karinta iyo karootada cayriin, laakiin waxaa fiican in la qalajiyo iyada oo la raacayo tiknooloojiyada wejiga ah ee foornada:
Rooti xididada si fiican hoos biyo iyo diirka.
Xoq oo ku shub warqada dubista.
U kulul foornada heerkulka ugu sareeya.
Ku rid karootada foornada ilaa 20 daqiiqo, ka saar oo ku qabow alaabta.
Ku soo celi hanaanka laba jeer oo dheeraad ah, adigoo illoobin inaad isku daraan waxyaabaha ku jira. Ka ilaali albaabka.
Boggeena internetka waxaad sidoo kale ka heli kartaa macluumaad faa'iido leh oo ku saabsan hababka, sifooyinka iyo meelaha lagu keydiyo karootada:
Ma dhaqi karaa ka hor inta aan la dhigan karin?
Goorma ayaan u baahanahay inaan sariirta nadiifiyo?
Heerkulka loo baahan yahay.
Sidee loo ilaaliyaa ilaa guga cusub?
Sida loo keydiyo karootada la qalajiyey? Ka dib marka la dhamaystiro nidaamka qalajinta, dhammaan dabacasaha waxay u baahan yihiin si fiican u qaboojiyaan oo ku shubaan weel caam ah maalin. Tani waxaa la sameeyaa si loo hubiyo in qoyaanka ku haray sheyga si siman loo qaybiyo.
Kaydinta muddada dheer, weelasha quraarada qalalan, mashiinka hawada qaada ah iyo boorsooyinka caagga ah, boorka ama bacaha suufka ayaa ku haboon. Meelaha kaydinta waa ka fiican tahay inaad doorato mugdi iyo qallalan.
Tayada kaydinta waxay ku xiran tahay adkaynta suxuunta - waa in si adag loo xidhaa. Karootada qalalan ayaa lagu kaydin karaa dhowr bilood, illaa hal sano.
Karootada la qalajiyey waxaa loo isticmaalaa in lagu diyaariyo cabitaanno bogsiiya, sida qayb ka mid ah cunto karinta khudradda, hilibka, hilibka kalluunka, digirta, suugada, macmacaanka macaan iyo macaan. Waxa ugu muhiimsan waa in la doorto qalabka saxda ah iyo ilaalinta tiknoolajiyada soo go'idda dalagga qoraxda.